रिसोर्टोपिया एपीके एन्ड्रोइडका लागि डाउनलोड गर्नुहोस् [आकस्मिक खेल] - लुसो गेमर
नोभेम्बर 25, 2021 नोभेम्बर 25, 2021 by जोन स्मिथ
यदि तपाइँ विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाइँको प्रबन्धन कौशल रिसोर्ट र होटल को मामला मा स्पष्ट छ। र मालिकहरूलाई छोटो समयमा राम्रो ग्राहकहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्न क्यालिबर प्राप्त भयो। त्यसोभए तपाई केको लागि पर्खिरहनु भएको छ? रिसोर्टोपिया एपीके को नवीनतम संस्करण डाउनलोड गर्नुहोस्।
मूलतः, 2D गेमि। यहाँ उल्लेख गरिएको एप क्याजुअल श्रेणीमा राखिएको छ, जहाँ गेमरहरूले आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्छ। धेरै भूमिका खेल्न र क्षेत्र भित्र बाँच्नको लागि पात्रहरूलाई मद्दत गर्नुहोस्। यहाँ अवस्था कथा जस्तै देखिन्छ।
हामी यहाँ छोटकरीमा कथाहरू सहित विवरणहरू छलफल गर्नेछौं। ध्यान केन्द्रित गरी समीक्षा पढ्दा खेल सजिलै बुझ्न मद्दत गर्नेछ। यहाँ सम्म कि टिप्स र युक्तिहरु लाई पनि फिल्ड भित्र गेमरहरुलाई मद्दत गर्दछ। त्यसकारण तपाईलाई सुविधाहरू मनपर्छ र प्ले गर्न तयार हुनुहुन्छ त्यसपछि रिसोर्टोपिया एन्ड्रोइड डाउनलोड गर्नुहोस्।
रिसोर्टोपिया एपीके के हो
Resortopia Apk DH-प्रकाशक द्वारा संरचित अनलाइन क्याजुअल गेमिङ अनुप्रयोग हो। गेमप्ले भित्र, क्यारेक्टर नाम Udon लाई खेलाडीहरूको सहयोग चाहिन्छ। रिसोर्ट स्पेस प्रबन्ध गर्ने र अतिथिहरूको लागि कोठाहरू नवीकरण गर्ने सन्दर्भमा।
कथा एक रोचक कथाबाट सुरु हुन्छ, जहाँ पात्रको नाम उडोनलाई पुरानो रिसोर्ट व्यवस्थापन गर्न सहयोग चाहिन्छ। Udon लाई पाइन एप्पल भनिने एक कार्यकारी द्वारा नियुक्त गरिएको थियो। उनी ग्राहकहरूको बारेमा धेरै सचेत छिन् र एक आदर्श प्रबन्धक खोज्छिन्।
अन्तमा, उडोनलाई रिसोर्टको व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्ने मौका दिइयो। अब यो खेलाडीहरूमा निर्भर छ कि उनीहरूले केटालाई खराब अवस्था रिसोर्ट व्यवस्थापन गर्न कसरी मद्दत गर्छन्। यहाँ गेमप्ले भित्र, फर्नीचर, ओछ्यान र खेलौना आदि सहित धेरै अन्य वस्तुहरू।
गेमरको कर्तव्य भनेको प्रणालीलाई आदेश दिन र आगन्तुकहरूको लागि सुविधाहरूको व्यवस्था गर्नु हो। जति तपाईं वस्तुहरू व्यवस्थापन गर्न सफल हुनुहुन्छ, धेरै मानिसहरू रिसोर्ट भ्रमण गर्नेछन्। त्यसोभए तपाइँ विश्वास गर्नुहुन्छ कि तपाइँ परिस्थितिहरू व्यवस्थित गर्नमा राम्रो हुनुहुन्छ त्यसपछि रिसोर्टोपिया डाउनलोड स्थापना गर्नुहोस्।
विकासकर्ता DH- प्रकाशक
प्याकेज नाम global.hotel.twgame
गेमप्ले खेल्ने क्रममा, हामीले उडोन कठिन अवस्थामा रहेको भेट्टायौं। जहाँ उहाँ विनाशकारी ठाउँहरू पुन: निर्माण गर्न राम्रो छैन। त्यसैले यस अवस्थामा, हामी खेलाडीहरूलाई उनीहरूको सहज सोच प्रयोग गर्न र रचनात्मक दिमागलाई प्रतिबिम्बित गर्ने अद्वितीय डिजाइन प्रस्ताव गर्न सिफारिस गर्दछौं।
जसको मतलब खेलाडीहरूलाई रंग, डिजाइन, फर्निचरको प्लेसमेन्ट, फर्निसिङ र शैलीहरू आदि व्यवस्थापन गर्न अनुमति दिइन्छ। हामीले गेमप्ले भित्र मुख्य सुविधाहरू सहित विवरणहरू व्यक्त गर्ने तरिका। यो प्रयोग को मामला मा सरल देखिन्छ।
तर वास्तवमा, प्रक्रिया धेरै गाह्रो छ किनभने मानिसहरूको व्यवहार पढ्न सजिलो छैन। तैपनि, मानिसहरूको व्यवहार पढेर परिस्थितिको विश्लेषण गर्न सम्भव बनाउँछ। उनीहरूलाई मनपर्ने चीजहरू उनीहरूको कोठा भित्र आरामको लागि राख्छन्।
फर्नीचर सहित नयाँ वस्तुहरू थप्न बिन्दुहरू चाहिन्छ सम्झनुहोस्। स्रोतहरू सहित अंकहरू ऋण बिना। गेमरहरूका लागि कोठा भित्र वस्तुहरू प्रत्यारोपण गर्न असम्भव छ। रिसोर्टमा मानिसहरूलाई आकर्षित गर्न हथौडा चाहिन्छ।
किनभने तपाइँका सुविधाहरूको विज्ञापन बिना। रिसोर्टमा मानिसहरूलाई आकर्षित गर्न असम्भव छ। एकचोटि तपाईंले सेवाहरू पूर्ण रूपमा प्रस्ताव गर्न सफल भएपछि, गेमरले अतिरिक्त अंकहरू प्राप्त गर्नेछन्। पछि अन्य वस्तुहरू खरिद गर्न ती बिन्दुहरू प्रयोग गर्नुहोस्। त्यसोभए तपाइँ खेललाई माया गर्नुहुन्छ त्यसपछि रिसोर्टोपिया गेम डाउनलोड स्थापना गर्नुहोस्।
एपीके का प्रमुख सुविधाहरु
दर्ता आवश्यक छ।
खेल स्थापना एक प्रमुख अवसर प्रदान गर्दछ।
रिसोर्ट सेवाहरू प्रबन्ध गर्न र अन्य ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्न।
राम्रो पैसा कमाउन र पछि प्रत्यारोपण सुविधाहरू व्यवस्थापन गर्नुहोस्।
जस्तै बेड, फर्निचर र अन्य वस्तुहरू।
रिसोर्टोपिया एपीके कसरी डाउनलोड गर्ने
हाल गेमिङ एप प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सकिने छ। तर केही प्रमुख प्रतिबन्धहरू र अन्य निवारक उपायहरूको कारण। एन्ड्रोइड गेमरहरूले यसलाई त्यहाँबाट सीधा कुनै प्रतिरोध बिना डाउनलोड गर्न असमर्थ छन्।
त्यसैले गेमरहरूको चिन्ता र उनीहरूको आवश्यकतालाई केन्द्रित गर्दै। हामी एन्ड्रोइड गेमरहरूको लागि डाउनलोड सेक्सन भित्र यहाँ मौलिक एपीके फाइल पनि प्रस्ताव गर्दछौं। गेमिङ एप्लिकेसनको नवीनतम संस्करण डाउनलोड गर्न कृपया प्रदान गरिएको डाउनलोड लिङ्क बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।
हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका गेमिङ एप फाइल मौलिक छ। र एन्ड्रोइड स्मार्टफोन भित्र डाउनलोड र स्थापना गर्न यो विशुद्ध रूपमा सुरक्षित छ। यद्यपि, हामीले आवेदनको प्रतिलिपि अधिकार कहिल्यै राख्दैनौं। तसर्थ यदि केहि गलत भयो भने हामी जिम्मेवार हुने छैनौं।
धेरै फरक क्याजुअल गेमिङ एपहरू यहाँ प्रकाशित र साझेदारी गरिएका छन्। सबै भन्दा राम्रो वैकल्पिक क्याजुअल खेलहरूको खोजी गर्नेहरूले लिङ्कहरू पछ्याउनु पर्छ। जो हुन् GemStone APK खन्नुहोस् र Championfy APK.
त्यसोभए तपाईं होटलहरू र विभिन्न रिसोर्टहरू प्रबन्ध गर्नमा राम्रो हुनुहुन्छ। र तपाईं रचनात्मक विचारहरू प्रस्ताव गरेर कठिन परिस्थितिमा उडोनलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्नुहुन्छ। त्यसोभए तपाई केको लागि पर्खिरहनु भएको छ? रिसोर्टोपिया एपीकेको नवीनतम संस्करण डाउनलोड गर्नुहोस् र चयन गरिएको रिसोर्टलाई शीर्ष ५ मूल्याङ्कन गर्नुहोस्।
विभाग आकस्मिक, खेल ट्याग थ्रीडी खेल, रिसोर्टोपिया एन्ड्रोइड, रिसोर्टोपिया एपीके, रिसोर्टोपिया डाउनलोड गर्नुहोस्, रिसोर्टोपिया खेल डाउनलोड मेल अन्वेषण